Crash Into - Boys Love - Bl - Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Crash N'ime M nkezi 4.3 / 5 si 14
NA / A, o nwere ihe nlere 56.5K
Manhwa, Weebụ, Yaoi
Seung-chan na-emesi ya ike. O rijuo afọ n'efere ya ruo ọtụtụ awa ọrụ, ma ugbu a ọ pụghị izu ike ọ bụla n'ụlọ! Kwa abalị, ịkwa ákwá nke agụụ mmekọahụ na mkpọtụ ndị na-eme ihe ike n'ụlọ si n'ụlọ elu na-eme ka ọ mụrụ anya. Dị nnọọ ka ọ nọ na njedebe ya, ọ na-enwe ohere n'elu ọmarịcha, enigmatic Hyesung n'èzí ụlọ ya. O doro anya na ụda ụda niile ndị ahụ enweghị ike isi n'ọnụ dị mma dị otú a pụta? Mana dị ka Seung-chan chọpụtara n’oge na-adịghị anya, enwere ọtụtụ ihe na Hyesung
Nwere ike ịchọpụta ọtụtụ Manga n'efu online
Chapter 47 Nwere ike 2, 2021
Chapter 46 Nwere ike 2, 2021
Onye Roomlọ Na-achọghị - Webtoon Manhwa Hentai